Iweghachite data, weghachite faịlụ na Email Iweghachite Software site na DataNumen
Ngwaahịa Ngwanrọ eweghachite data
Anyị na-enye ngwanrọ na-emeri ngwanrọ data mgbake maka faịlụ MS Office, mgbake email, nchekwa na faịlụ ndabere, ọdụ data, onyonyo na dọkụmentị na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndepụta ngwaahịa zuru ezu
Archive / Ndabere
Image / Akwụkwọ
Mmadụ Bịa ka DataNumen
DataNumen bụ onye ndu ụwa na teknụzụ mgbake data. Anyị na-enye usoro mgbake data gụnyere ngwanrọ sọftụwia nke mgbake data anyị na-emeri, ọrụ nnabata data ọkachamara, yana ngwa mmepe ngwanrọ (SDK) maka ndị mmepe.
The interface dị mfe ịgbaso ma ghọta. Abụ m
ITlọ Ọgwụ IT lara ezumike nká
SDK maka ndị mmepe
Ihe ngwanrọ sọftụwia anyị (SDK) nwere ike inyere gị aka iwebata teknụzụ mgbake data anyị enweghị atụ na sọftụwia gị na enweghị nsogbu.
Ndepụta ndị ahịa zuru ezu